वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक यौनसम्पर्क गर्न सक्छ ? जानी राखौ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ११ चैत्र २०७५, सोमबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
कतिपय परिवारमा अभिभावकहरु बीचको यस्तो यौन क्रियाकलापका गतिविधिहरु भएका हुन्छन र कतिपय छोराछोरीहरुले थाहा पाएका हुन्छन् । यो एक किसिमको खुल्ला गोपनीयता जस्तै हुने गरेको धेरै बालबालिकाले आफ्ना मिल्ने साथीहरुसँग गुनासो गरेको हुन्छन् ।
त्यस्तो अनुभव गरेको प्राय छोराछोरीहरुले यसलाई समान्य रुपमा नै लिएका हुन्छन् । तरपनि सबै बालबालिकाले अभिभावकहरुको यस्तो व्यवहार समान्य रुपमा स्वीकार्न सकेका हुदैनन ।
छोराछोरीहरु जो किशोरअवस्थामा पुग्न थाल्दछन, उनिहरुको शारीरिक मानसिक र संवेगात्मक परिवर्तनहरू तीव्र गतिले भइरहेको हुन्छ । सम्झनुहोस् त तपाई आजभन्दा २–४ वर्ष अघि कस्तो हुनुहुन्थ्यो ? शरीर सानो थियो होला । महिनावारी भर्खर शुरु भएको थियो होला । स्तन दुख्ने र विस्तै त्यो स्तन बढ्दै जान थाल्यो होला ।
यी परिवर्तहरू सँगै तपाईमा यौन आकर्षण वा यौन प्रतिको रुचि र त्यसलाई नजिकबाट नियालेर हेर्न खोज्ने स्वभाव विकास भएको हुनुपर्दछ । त्यसैले, तपाईले बाबा ममीले गरेको यौन क्रियाकलापको हेक्का राख्न थाल्नुभयो ।
अभिभावकहरुले यौनसम्पर्क गरेको थाहा पाउँदा तपाईलाई उहाँहरू प्रति घृणाभाव विकास हुनु पनि तपाईमा हुर्कदै गरेको यौन भावना र चाहानाको उपज हो । यसमा तपाईले दिक्क वा अप्ठयारो मान्नु भन्दापनि सहज र सामान्य रूपमा लिनु पर्छ । विर्सनु नहुने कुरा के भने तपाई हामी यदि हाम्रा आमबुबाले यौन सम्पर्क नगरेको भए जन्मिने नै थिएनौ ।
त्यसैले, स्वीकार्न पर्ने कुरा के हो भने जसका पनि आमाबुबाले यौनसम्पर्क गर्छन । बरु उनीहरूको यौन सम्पर्कलाई गोप्य राख्न र सहज बनाइदिन तपाईले गर्न सक्नेसम्मको मद्दत गर्नुपर्छ ।
श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो…, उनलाई भेट्न मात्र गएकी थिएँ तर यौनसम्बन्ध भयो !
म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरो विवाह १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला मेरा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो। माया/प्रेम के हो थाहा थिएन। बहकाउमा आएर गाउँकै विवाहित पुरुषसँग हेलमेल भयो र माया/प्रीति बस्यो । उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि मलाई गलत गरें भन्ने लाग्यो अनि त्यो घरमा बस्नु उचित लागेन । मैले आफ्नो घर छाडें र सम्बन्ध-विच्छेद गरे ।
जोसँग सम्पर्क भयो, उनी विवाहित भएकाले उनको घर जानु पनि उपयुक्त लागेन । माइती जाने प्रश्न नै भएन । मैले यी सबै बेहोरा अवगत गराएर श्रीमानलाई पत्र लेखें र यथार्थ कुरा बताएँ । अहिले म काठमाडौंमा तरकारी बेचेर जीविका चलाउँदैछु । केही समययता मेरा श्रीमान काठमाडौंमै व्यापार गरेर बसेका छन् । बेला/बेलामा उनको र मेरो भेट हुन्छ। उनले गाउँमा दोस्रो विवाह गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनी मसँग असल व्यवहार गर्छन्, दुःख(सुख सोध्छन् र विवाह किन नगरेको भनेर सम्झाउँछन्। एक्लै बस्नुभन्दा मेरै डेरामा मसँगै बस भनेर कर गर्छन्। एक दिन म उनलाई भेट्न मात्र गएकी थिएँ, तर हामीबीच यौनसम्बन्ध भयो। यस्तो कुराले म बिलखबन्द र पश्चातापमा परेकी छु। उनको डेरा गएर सधैंका लागि बसौं, म जुठी भैसकें। नबसौं, उनको अनादर गरेजस्तो हुन्छ, द्विविधा र तनावमा छु। अब म के गरौं ?
तपाईंकै जस्ता घटना थुप्रै मानिसले भोग्दै आएका छन। तपाईं मात्र द्विविधा र तनावमा पर्ने एक्लो हुनुहुन्न। विगतका घटनाले तपाईंलाई पटक(पटक घचघच्याइरहन्छ, यो स्वाभाविक हो। तपाइर्ंले उक्त घटनाबाट शिक्षा लिनुभएको छ कि छैन भन्ने पक्षचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मनोविज्ञानका हिसाबले आफ्नो पुरानो घटनालाई छलफलमा ल्याएर समाधान खोज्नु नै एक कदमअघि बढ्नु हो। त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यस्ता घटना रोक्नुभयो भने द्विविधा र तनावबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले विगतका घटनालाई शिक्षाका रूपमा ग्रहण गरी बाँकी जीवनलाई सुख एवं सन्तोषमय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। घटना दोहोर्‍याइरह्यो भने समस्या बढ्दै जान्छ।
भर्खरै जर्नल अफ सोसिएल साइन्स इन्ड साइकोलोजीले एउटा रोचक तथ्य उजागर गरेको छ। कम्तीमा पनि १३ वर्ष सँगै बसेका र ४ महिनाअघि छुट्टएिका जोडीहरूमा एउटा अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएअनुसार ८२ प्रतिशत जोडीले अझै पनि सम्बन्धबिच्छेद भएका श्रीमान्(श्रीमतीसँग भेटघाट हुने र २१ प्रतिशतले अझै पनि यौन सम्बन्ध हुने गरेको बताए।
छलफल गर्दा कुनै न कुनै निष्कर्ष अवश्य निस्कन्छ। निस्कन नसके तपाईंले यस्ता पश्चातापबाट बच्न मनोविद्हरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीसँग तस्करकाे सेटिङ
धनगढी । समाजमा व्याप्त आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण, रोकथाम र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने…
वि.सं.२०७५ साल असोज ०३ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०१८ सेप्टेम्बर १९ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।…
अझै केहि दिन भारी बर्षा, बाढी पहिरोबाट सचेत हुन आग्रह
काठमाडौं । सोमबार नेपालमा यू.एस.–बङ्लाको विमान अवतरणको क्रममा दुर्घटना भयो । उक्त विमान दुर्घटनामा २२ नेपालीसहित ४९ जनाको ज्यान…
क्यानाडाका नाममा ठग्दै डुल्स्को म्यानपावर, ‘फोनबाटै पनि २० देखि २५ लाख लाग्ने र २ लाख शुरुमै दिनुपर्ने प्रस्ताव’
काठमाडौं । केन्द्रमा जसको सरकार बनेपनि बिचौलियाले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेताका संरक्षणमा जनता ठग्ने धन्दा भने कायमै राखेका हुँदारहेछन्…
रुकुम । रुकुम पुर्वको सिस्ने गाँउपालिका वडा नम्बर ५ मा जिप दुर्घटना भएको छ । जिप दुर्घटना हुँदा ४…
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 361 views
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा 34 views
चीनमा भन्दा अमेरिकामा धेरै मानिसको कोरोनाबाट मृत्यु 20 views